Mourinho oo Taleefanka ka wacay mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan Barcelona iyo Laacibka oo qanacsan – Gool FM
Mourinho oo Taleefanka ka wacay mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan Barcelona iyo Laacibka oo qanacsan
Byare March 27, 2018
(Europe) 27 Maarso 2018. Jose Mourinho ayaa la warinayaa inuu Talaafankiisa gaarka ah ka wacay daafaca Barcelona Samuel Umtiti, kaa oo iminka la warinayo inuu ku dhawaanayo inuu ku soo biiro Manchester United.
Daafaca reer France ayaa 76-kulan u saftay Barca tan iyo sidii uu ugu soo biiray, laakiin 24-jirka ayaa bilooyinkii dambe si xoogan lala xiriirinayay camaaliqada England.
Umtiti ayaa la fahansan yahay inuu dalbanayo mushaar dhan usbuuciiba 150,000 oo bound (7.9 milyan oo bound sanadiiba) si uu u sii joogo Nou Camp, waana Mushaar ay mar horeba miiska u soo saartay kooxda Jose Mourinho.
Warsidaha Sport ayaa sheegaya in Mourinho uu mushaaraadkaasi u bandhigay daafaca Barcelona mar uu ka wacay Taleefankiisa, waxaana la warinayaa in Umtiti uu u maqsuuday midaa.
Waxaa la aaminsan yahay in Jose uu si joogta ah ula xiriirayay daaficii hore ee Lyon.
Barcelona ayaana iminka la warinayaa inay suuqa ka raadineyso wixii u badeli lahaa daafaca reer France.
Emre Can oo ka hadlay wararka ku aadan Mustaqbalkiisa
Lionel Messi oo qiray in Koobkan Adduunka uu.....